Soomaaliya Ma Waxay Noqotay Kilinka 6aad ee Itoobiya??? – Idil News
Soomaaliya Ma Waxay Noqotay Kilinka 6aad ee Itoobiya???
Arrinta Cabdikariim Sh. Muuse (Qalbi dhagax) waxay dharka ka xayuubisay oo banaanka soo dhigtay taagdarida, taloxumida, iyo aqoondxumida dawladda iyo madaxda Soomaaliyeed.
Cabdikariim, sida wararku sheegayaan, wuxuu ku dhashay kuna ababay magaalada Xamar. Intaasi waxay kuu cadaynaysaa inuu yahay muwaadin Soomali ah. Waxaa intaas sii raaca inuu ka mid noqday ciidankii qaranka Soomaaliyeed.
Ma qarsan inuu ka mid yahay uruka ONLF oo taas afkiisa ayaa laga hayaa. Dawlaadda Itoobiya ONLF waxay u aqoosantahay urur argagixiso ah, sida dawladdii Mengistu ee Itoobiya ay qolyahan maanta xukunka Itoobiya haysta ugu tilmaami jireen inay yihiin argagixiso.
Dawladda Soomaaliya inay muwaadin Soomaali ah dawlad kale u gacan geliso sharci u fasaxaya ma jiro. Wixii danbi ah oo uu ka galay Soomaaliya ama dal kale waxay ahayd in wadanka gudihiisa maxkamad lagu saaro, wixii danbiya oo lagu helana uu ciqaabteeda ku dhamaysto wadanka gudihiisa.
Madaxda Soomaaliya ma Itoobiyaa u caga juglaysay oo tiri xoog baan kula baxaynaa haddii aydnaan soo dhiibin Cabdikariim? Cidna kama qarsoona Itoobiya in min Berbera ilaa Kismaayo ciidamo u joogaan, waxay rabaana wadanka gudihiisa ka suubsadaan.
Waa ayaan darro in dawladda Soomaaliya ay shakhsi Soomali ah ay u gacan geliso Itoobiya, usbuuc ka dibna golaheeda wasiiradu soo dhoodhoobaan sababihii loo gacan geliyey.
Ma wayna ku haboonayn inta an la gacan gelin in baaritaan la sameeyo, dabadeed haddii la ogaado inuu gacan saar la lahaa Al-Shabaab, la yiraahdo Cabdikariin waa muwaadin Soomaali ah, wadanka danbi ka galay, sharciga ayaan hor keenaynaa. Ciddii kaloo qabta inuu danbi ka galay ha nala soo xiiraaraan, wixii macluumaad ahna ha noo soo gudbiyaan.
Haddiise sheekadu sidaan ku sii socoto, maxaa lagu diidin in la yoraahdo Soomaaliya waa Kilinka 6aad ee Itoobiya???